कुन समयमा कुन फलफूल खाने ?
एजेन्सी । हामी जुन पायो त्यही फलफुल जुनपायो त्यही समयमा खान्छौं तर त्यो गलत अबधारणा हो । विज्ञहरुका अनुसार उच्च क्यालोरीयुक्त फलफूल बिहानै खानु उपयुक्त हुन्छ, यसले बिहानै जोश दिन्छ । तर रातमा त्यस्ता हफफुल खान हुँदैन भन्छन् तिनै विज्ञहरु । त्यसोभए कुन समयमा कुन फलफुल खाने त ?
बिहानको समयमा परिश्रम वा काम गरिने भएकोले यो समयमा बढी फाइबरयुक्त फलफूल खानुपर्छ । जस्तो स्याउ, अनार र केरा ।
ब्रेकफास्टपछि र लन्चअघिः
साँझ ६ बजेपछि तपाईंको शरिरको मेटाबोलिक दर बिस्तारै घट्दै जान्छ, जसका कारण शरिरले क्यालोरीलाई उपयोग गर्ने क्षमतामा क्रमिक ह्रास आउछ । उच्च क्यालोरियुक्त आँप साँझ परेपछि कुनै पनि हालतमा खानुहुन्न । बरु खरभुज, सुन्ताला, चेरी लगायतका उच्च फाईबरयुक्त फलफुल खानुपर्छ ।